भाग्यमानी छोरो – Part 40 – दार्जिलिङ्ग तर्फ3- Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » भाग्यमानी छोरो – Part 40 – दार्जिलिङ्ग तर्फ 3
झण्डै साढे पाँच बजेतिर विकेशले भन्यो “यार बियर खाने होईन ?” ठिक त्यसैबेला ढोकामा ढकढक भयो, मैले ढोका खोलें, होटलको काम गर्ने केट आएको रैछ “दाजुहरु खाना कतिबजे लिनुहुन्छ ?” “ढिलो गरि कति बजेसम्म खाना पाउँछ भाई !” “नौ बजेसम्म त हुन्छ दाजु खुल्लै हुन्छ !” ऊ जान खोज्दै थियो मैले रोक्दै भनें “भाई बियर पाउँदैन ?” “होटलमा त पिउनु पाउँदैन हौ दाजु ! पुलिस आइरहन्छ… रुमभित्रै पिउनुहुन्छ भने फरक पर्दैन ! अनि आफैं ल्याउनुभयो भने राम्रो हुन्छ हौ दाजु… यहाँ ल्याईदिएको म्यानेजरले पत्ता पायो भने चार्ज डबल मारिहाल्छ, यसो घुम्नुस् न चौरस्तातिर साँझमा रमाईलो हुन्छ अनि दारु दुकान पनि खुल्ला हुन्छ अब तर बाटोमा नपिउनु नि पुलिसले लगिहाल्छ नि !” उसले एकैसासमा अर्तिसमेत दिन भ्यायो । मैले पनि ठिकै भनिस् भनेर उसलाई धाप मार्दै भनें “लु धन्यवाद् भाई..। हामी त्यसै गरुलाँ हौ !” मैले पनि विकेशलाई भनें “ओई विकेश अब बियर खान्छस् भने झोला बोकेर हिँड यहाँ त प्लास्टिक पनि ब्यान पो छ ! लौ आमाहरु जाउँ दार्जिलिङ्गको चौरस्ता त साह्रै चर्चित पो छ त !” त्यसपछी हामी सबै तयार भएर चौरस्तातर्फ लाग्यौं । साँझ साढे सात बजेसम्म चौरस्तातिर घुमेर बाटोमा बेच्न राखिएका स्ट्रिटफुड र रक्सी लिएर हामी होटलमा फर्कियौं । होटलको रुमभित्र छिरेपछी विकेशले सरासर बियर खोल्यो र रती म र विकेश भएर बियर पिउन थाल्यौं, बिकेशले केहि बेरमै सुमीनालाई बियर अफर गरेपछी आमाले पिउँदिन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले आमाको पोका समाएर खेलाउँदै भनें “हजुरको बुडो दिनदिनै झ्याप भएर त्यो शुभद्राको चाकमा चिक्नाले मेरो फेला पर्नुभयो… के को लाज मान्नुहुन्छ अलिकति चाख्नु न ?” रतीले पनि आफूले खाएकै बोतल ल्याएर आमाको मुखमा ठोस्दै भनिन् “थोरै त पिउनु…” आमाले मुख बिगारी बिगारी दुईतिन घुट्को बियर पिउनुभयो । नेपालको जस्तो मिठो थिएन दार्जिलिङ्गको बियर तैपनि हामीले ल्याएको सबै निथार्*यौं, बियर निथार्दासम्म रुमको सर्भिस फोन बज्यो ।
विकेशले त्यो फोन रिसिभ गर्दै हामीलाई भन्यो “डिनर रेडी छ रे !” मैले आमाको पोकालाई जोडले मोल्दै भनें “जाउँ आमा खाना खान !” आमाले उत्तरमा भन्नुभयो “जाँठा भालु भन्दा बढ्ता तरिकाले आमाको पोका खेलाउँछ अनि बेला कुबेला चिक्छस् र पनि आमा भन्न छोड्दैनस् !” मैले आमाको मुखमा मुख जोडेर मजाले टङ्ग किस हानें र छुट्टिदै भनें “त्यसैमा त मज्जा छ नि ? सोच्नुस् त तपाईंले आफ्नो बुढो वा ब्वाईफ्रेण्ड अथवा ग्राहकसँग चिकाएको भए यति मजा आउँथ्यो र त्यही भएर निर्धक्कले छोरा भन्दै चिकाउनुस्… मजा आउँछ… “ विकेशले पनि आफ्नो आमाको पोका जोडले मसल्दै भन्यो “अहिले चाँही महेन्द्रको कुरा मलाई सोह्रैआना ठिक लाग्यो है !” अनि विकेशको आमाले पनि हो मा हो मिलाउँदै भनिन् “यो कुरा चाँही ठिक हो है सुमीना… चिकाउन त कतिलाई चिकाईयो चिकाईयो तर छोरासँगै चिकाउँदाचाँही जवानी फर्किएर आएको अनुभव भएको छ मलाई ! खाली काठमाण्डौंमा पुगेपछि योसँग चिकाउँदा यस्को बाउले थाहा पाए भनें के गर्ने भन्ने पो डर छ मलाई…” “लौ विकेश तलाई त गाह्रो पो पर्छ त ! दिदीलाई पनि चिक्छु भन्दैछस् अनि बाबाको व्यवस्थापन नगरी त कसरी हुन्छ र ?” “यार कुनै उपाय लगा न त ! जसले गर्दा म र आमा बेरोकटोक मजा गर्न सकौं !” त्यसपछी हामी खाना खानका लागि डाइनिङ्ग हलतिर लाग्यौं, खाना खाँदै गर्दा म्यानेजर आयो र बिहान पाँच बजे साइटसिनको लागि गाडी आईपुग्छ भनेर गयो, रुम बुक गर्दा नै मैले गाडीको कुरा गरिसकेको थिएँ । दिनभरको चिकुवा रमाईलो अनि बेलुका बियर पिएकोले आज आमाहरुलाई नचिक्ने र बिहान सबेरै उठ्ने सल्लाह भयो । सामान्य गफ गर्दै हामी सुत्यौं, तर आमाले मेरो छाती तथा लाँडोलाई हल्कासँग खेलाउँदै रहनुभयो । कतिबेरमा हामी निद्रामा लिन भयौं कसैलाई पनि थाहा भएन।
बिहान सबेरै पाँच नबज्दै मेरो निद्रा मोबाइलमा लगाएको आलार्मले खुल्यो । म उठें अनि सबैलाई पनि उठाएँ, हामी सबै बाथरुम छिर्*यौं । आमा कमोडमा बसेर दिशा गर्न थाल्नुभयो, मैले भित्तातिर फर्काएर पिशाब गर्न थालें, विकेश पनि मसँगै आएर पिशाब गर्न थाल्यो, रती भुईंमा पुती फेस्याएर पिशाब गर्न थालिन् । ब्रश गर्दागर्दै पालैपालो हामीले आफ्नो नित्यकर्म सकायौं ।
गाडी आइसकेको हुनाले हामी लगभग सवा पाँच बजे नै टाइगर हिलतिर लाग्यौं । अगाडी कुनै अर्कै मानिस थियो, ड्राइवर पछाडीको सिटमा हामी दुई आमा-छोराको जोडी बसेको थियो भने पछाडीको सिटमा अरु नै पर्यटक थिए । हिजो दिउँसोदेखि नचिकेको हुनाले मैले काँधबाट आमालाई बेरेर हातलाई आमाको टि-शर्टभित्र छिराएर बुब्सलाई च्याप्प समाएर मसल्न थालें । अध्यारैं भएका कारण मैले आमालाई मसल्न थालेको थिए, आमाले पनि कुनै प्रतिकृया नदिईकन मलाई साथ दिईरहनुभएको थियो । बुब्स खेलाउँदा खेलाउँदै मैले विस्तारै आमाको मुखमा मुख जोडें र आमाको जिब्रो चुस्न थालें, आमाले पनि थुक साट्नमा सहयोग गर्दै हातले मेरो कमरमुनि छामछाम छुमछुम गर्नुभयो र मेरो ट्राउजरको ईलास्टिक तानेर भित्र हात छिराउनु भयो र लाँडोलाई समाएर खेलाउन सुरु गर्नुभयो । उता विकेश झन एक कदम अघि सरेर आमाको टि-शर्टलाई हल्का साइडतिर सारेर बुब्सनै चुसिरहेको थियो । मैले विकेशलाई धेरै उत्साहित नहुनका लागि आग्रह गरें र विकेशले त्यसपछी आमाको बुब्सलाई भित्रैबाट सहलाउन थाल्यो । झण्डै पौने छ बजे हामी टाइगरहिल पुग्यौं । टाइगरहिल लगायत दार्जिलिङ्गको घुम, बतासे, रक गार्डेन, जापानी गुम्बा, रोपवे, तेन्जिङ्ग रक अनि चियाबगान गरि हामीले त्यहाँको सम्पूर्ण पर्यटकिय स्थलहरु घुम्यौं । रतीको मुखमा त जतिखेर पनि ईलामै राम्रो भन्ने झुण्डिइरह्यो, समग्रमा नयाँ ठाँउ बाहेक हाम्रा लागि कुनै नौलो थिएन, आमाले पनि नाकै खुम्च्याएर दार्जिलिङ्गको भ्रमणलाई लम्ब्याउने चाहना नराखेपछी हामी एउटा सुमो समातेर पानी टङ्कीतर्फ हानियौं
chak chikeko katha, chikeko katha, chikeko katha nepali, chikeko nepali story, chiyabari ma chikeko, erotic story nepali, inscest sex story, inscest story, iscest nepali sex story, lado chusi, lado puti ma, lado puti ma chikeko story, mam sanga chikeko, naango boobs, nepali chikeko story, nepali erotic story, nepali inscest story, nepali puti, nepali puti chikeko, nepali sex stories, nepali sex story, nepali sexy story, nepali sexy story nepali, Pallo Ghar Ko Neha Le Lado Chusi, puti chikeko, puti chikeko nepali, puti chikeko story, puti m, Stories chak chikeko katha, भाग्यमानी छोरो